Wantaa, saxaatoo, yk goodayyaa galmee keessa qubachiissuudhaaf korkoddaalee fayyadamuu nidandeessa. Yammuu galmee fooyyessitu, wantaan korkoddaa'e bakkasaa tura, ykn siqa. Dirqalawwan korkoddeessuu armaan gadii niargamu:
Maalima filataame akka arfiitti barruu ammee keessatti korkodeessa. Yoo hojjaan maalimaa filatamee hagamtaa bocquu ammaa kan caaluu tahee, hojjaan sararaa maalima qabatee nidabala.
Fuula HTML irratti calaqqee wiirtessuudhaaf, calaqqeecha saagi, korkodeessi, "akka arfiitti" sanaan booda keewwaticha wiirtessi.
Maalimaa filatame gara arfiitti korkodeessi.
Maalimaa filatame gara keewwatatti korkodeessi.
Maalimaa filatame gara fuula ammeetti korkoda.
Maalimaa filatame gara naannoo goodayyaatti korkodeessi.
Yammu wanta, saxaatoo yookaan godayyaa saagdu, sajoon korkoddii bakka maalimini korkodaa'etti mul'ata. korkodametti mul'ata. Maalimaa korkodaa'e maalimicha bakka biraatti harkiisuudhaan qubachiissuu nidandeessa. Dirqalawwan korkodeessuu maalimaa jijjiiruuf, maalimicha mirga-cuqaasi, sana booda dirqalaa tokko baafata xiqaa Korkoddii irraa fili.
Title is: Wanta Qubachiisaa